I-Aries kunye noMhlaza-Ukuhambelana kwiSini, uthando kunye noBomi - Iiary
Ukuhambelana kwe-Aries kunye noMhlaza kuThando, uBomi, isondo, unxibelelwano, ubuhlobo kunye nokuthembela. x
Aries & CancerUkuhambelana ngokwesondo kunye nobudlelwane obusondeleyo
Sidla ngokubona uphawu lwe Umhlaza njenge-asexual kakhulu. Usapho lwethu lubonakaliswa ngumqondiso weCancer kunye neNyanga, kwaye ngumngeni wengqondo kuthi sonke ukuba siqonde ukuba abazali bethu bangabantu ngokwesondo. Oku kuya kuba kuhle ukuba amalungu ale ntsapho yeCancer yendalo yonke ayengaqinisekanga kubume bawo be-asexual ngokunjalo. Iimpawu zabo zeemvakalelo zivumela kuphela ubudlelwane bezesondo kunye nentsingiselo kunye nokuthamba okwaneleyo. Kuphela xa bedibana nomntu ofanelekileyo ukuba bakhululwe, beza kufunda ngezinye iinkalo zesini sabo.
Ingxaki ngobudlelwane bezesondo kunye ne Aries kukuba amaqabane e-Aries aqhelekanga ukuba nothantamiso ukuqala. Kufuneka bafunde ukubonisa iimvakalelo. Kubo ukusondelelana yinto eyakhiweyo, ayichazwanga. Ukuba bayakwazi ukuxolelanisa ezi yantlukwano zinkulu ekuqaleni kobudlelwane babo kwaye ukuba akukho namnye kubo onyanzelwayo ukuba enze nantoni na abangekakulungeli, umtsalane wabo omnye komnye kufuneka wenze iqhinga kwaye ubudlelwane babo bokwabelana ngesondo bunokuba bubenenkanuko yokwenene kwaye buyolisayo kubo. bobabini.
Aries & CancerThembela
Umba wokuthembana yinto eyahlukileyo kwesi sibini. Abafane baxoxisane ngokuthembana kwabo ngokunyaniseka komnye nomnye. Ngokuqhelekileyo ingxaki abadibana nayo ngumba wokuthembana xa kufikwa kubudlelwane obusondeleyo. U-Aries unombono ohlukileyo malunga nokusondelana. Emehlweni eqabane labo loMhlaza banokubonakala betyhala kwaye bendlongondlongo ngesimo sengqondo esingakhokelela kuyo nayiphi na into esondeleyo ekuphumleni. Kanye njengokuba uMhlaza ungathanda ukuqonda ubume obuthe ngqo be-Aries, kuya kuba nzima kakhulu ukuyibona njengenye into ngaphandle kwerhamncwa.
Kukwakho ingxaki kwindlela ababonisa ngayo kwaye baqaphele iimvakalelo. Kungaba nzima ukuba iqabane le-Aries liqonde ukuba liyathandwa ukuba umntu ubuza kuphela imibuzo ephazamisayo, uzama ukubopha kwaye akafuni ukulala ngesondo. Kwelinye icala, uMhlaza uya kuziva uphulwe ngandlela zonke, ngaphandle kokuba iqabane lika-Aries licotha kwaye linomboniso ongaqhelekanga weemvakalelo ezithambileyo. Ngokuqhelekileyo naluphi na uhlobo lokungathembani kusisiphumo sokungakwazi ukukholelwa kwiimvakalelo zomnye komnye, kuba abaziqondi kakuhle.
Aries & CancerUnxibelelwano kunye nengqondo
Omabini la maqabane anotyekelo olufanayo lokwenza into eqhutywa yintshukumisa kwaye ayinqumle incoko ngaphambi kokuba bade bafikelele kwinqanaba layo. Asiyonjongo yabo ukusabela ngolu hlobo, kodwa bacofa amaqhosha omnye komnye kwaye kunzima kakhulu kubo ukuba bahlale begxile kwaye basombulule umba ebebethetha ngawo. Izinto abanomdla kuzo zahluka kakhulu, ngoko kwanaxa bezama ukuba nencoko enoxolo malunga nento engeyoyabuntu, kusengumlo ukugcina ingqalelo kumbandela kuthethwa ngawo, nabani na oqalisa intetho.
Isici sabo ekwabelwana ngaso kuphela ngumgangatho oyintloko weempawu zombini, ezibanika ukuqonda kakuhle malunga nobuntu be-ad hoc bomnye nomnye. Oku kuya kwenza ukuba kube lula kwisibini ukuba sibuyele kuzo zonke iingxabano ezinokubakho kunye nokungaqondani. Sekunjalo, emehlweni eqabane loMhlaza, olu hlobo lobudlelwane alunanjongo kwaye banokuzifumana besilwa ngendlela abangaziva ngayo.
Njengoko iimpawu zabo zilawulwa nguMars kunye neNyanga, libali le-archetypal lentlungu kunye nentlungu yeemvakalelo, ngoko ke iinjongo zabo kufuneka zibe nyulu ngokwenene. Kufuneka baphathane ngendlela ethambileyo, ecingisiswe kakuhle, belinganisa onke amagama abawathethayo. Oku kunokubakhathaza bobabini, ngaphandle kokuba bayamkela ngokupheleleyo into yokuba abafuni ukutshintsha ubuntu babo, kuphela indlela ababonisa ngayo kwaye benze umdlalo kuyo.
Aries & CancerIimvakalelo
I-Aries kunye neCancer zombini zinomvakalelo onzulu, nangona i-Aries ihlala ichazwa ngokungathi inokukhubazeka ngokweemvakalelo. Bashushu, banomdla kwaye balindele lukhulu kwiqabane labo xa kuziwa ekukrweleni ngaphantsi komhlaba. Imida yabo inokuba ngqongqo kakhulu njengoko besoyika uvakalelo lwabo kwaye ngamanye amaxesha benze njengamajoni angenantliziyo. Umhlaza unxiba iimvakalelo zabo njengedyasi yasebusika kwaye uzifihla kuphela xa uziva uneentloni ukubabonisa. Bayamkela imo yabo yeemvakalelo njengenikiweyo kwaye basebenzela ekuqondeni ilizwe lobuqu eligcwele intlonipho yecala labo elithambileyo. Sihlala sisithi uMhlaza ufuna ukuba nosapho kwaye ukhulise abantwana, kodwa oku akubangelwa yimfuno yabo yokuvelisa okanye ukuhlala endlwini imini yonke, kodwa ngenxa yokuba bafuna indawo ekhuselekileyo yecala labo leemvakalelo kunye nabantu aboneleyo bokwabelana nabo. indalo enovelwano kunye.
Nangona ezi ndlela kwiimvakalelo zabo zibonakala zihlukile, ziqonda ubunzulu bomnye nomnye kwaye kwiimeko ezininzi zihloniphana kule ndawo yobukho, kwimeko apho i-Aries ishiya ubume bayo obungenamonde ngaphandle kobudlelwane babo. Ingxaki ibonakala xa befanele ukuba baqonde indlela abavakalelwa ngayo omnye komnye, njengoko iimvakalelo azibonakali ngokulula xa zisebenzisana nobuntu beqabane ababuqondi ngokupheleleyo.
Aries & CancerImilinganiselo
Ngelixa i-Aries inika ukubaluleka okukhulu kwimeko yamandla yomntu, ukugxila kunye nokungaguquguquki, uMhlaza uxabisa ukukwazi ukuhlala unengqiqo kwaye uzinzile, iimpawu abanobunzima ekuzifezeni, okanye ukuba kwimeko yokulinganisela ngokweemvakalelo. Amaxabiso abo akadityaniswanga, ngaphandle kwento yokuba bobabini banembono yokuba uhlobo oluthile lolungelelwaniso lwexesha elizayo, olunokuba nzima ukufezekiswa, luya kubenza babengcono.
Aries & CancerImisebenzi ekwabelwana ngayo
Kanye njengoko i-Aries ifuna ukuzinikela kumzimba wabo wenyama, imidlalo kunye nazo zonke iindlela zokugcina amandla abo okudala aphezulu, uMhlaza ufuna ukulala, ukudanisa kunye nokutya konke abakufunayo. Ikakhulu babelana ngemisebenzi yesondo kunye nexesha lokuphumla, kuba uMhlaza mhlawumbi awunanjongo yokulandela eso santya se-Aries esiphambeneyo.
Olu lwalamano lunokuba buhlungu kumaqabane omabini kwaye lufuna umsebenzi omninzi ofakwe kuwo ukuze usebenze. Ifuna omabini amaqabane ukuba aziqhelanise kwaye enze utshintsho kwindlela abaziphatha ngayo, ngelixa i-tip ejikeleza omnye komnye ixesha elininzi. Ayisiyondlela ilula, kodwa imivuzo kukuqonda kwangaphakathi ukuthanda, okuzele yimvakalelo kunye nokukwazi ukwenza into ekhethekileyo ngokwenene. Ukuba bayaphumelela, mhlawumbi abanakuze baneliseke liqabane elahlukileyo.
Gemini Sagittarius Capricorn Iponti I-Scorpio